AMD ao amin'ny Macbook Pro sy iMac | 2016 Avy amin'ny mac aho
AMD Polaris Graphics ho an'ny Mac 2016
Rehefa manakaiky ny 13 jona andrasana isika dia mitombo hatrany ny fanantenana momba ny vaovao mety asehon'i Apple amin'ny WWDC 2016 manaraka. Tamin'ny alàlan'ny WCCFTech malaza no nahalalantsika izany Apple no mpanjifa azo antoka vaovao ho an'i Radeon.
Efa hitantsika ny fampisehoana avo lenta an'ireo mpikirakira sary AMD ao amin'ny Macbook Pro 15 ″ ambony indrindra ary ao amin'ny 27 ″ 5k iMac ary tena tsara ny valiny ka nanapa-kevitra ny hiditra ao amin'ny Apple i Apple. AMD fampidirana amina modely GPUs vaovao. Te hahafantatra bebe kokoa ve ianao?
Tamin'ny 2010 no nanombohan'ny Apple nanangana ny fahafaha-mampiasa sary AMD amin'ny solosain'izy ireo. Saingy ny endri-javatra izay natolotr'i Intel tamin'izany fotoana izany dia mbola ambony kokoa. Inona izao Vondrona Radeon Technologies nahavita nanatsara ny fanamboarana ny mpikirakira azy noho ny Teknolojia FinFET, Nahavita nampihena ny haben'ny chips azony izy ireo tamin'ny 28nm ka hatramin'ny 14nm, nanomboka niova ny lalao.
1 FinFet: mampihena ny habeny, fampisehoana indroa
2 Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny sary AMD Polaris ho an'ny Mac?
FinFet: mampihena ny habeny, fampisehoana indroa
Toa safidy sarotra ny nanapa-kevitra ny hampiditra sary vaovao amin'ny Mac 2016 NVIDIA sy AMD, ity farany voafidy noho ny haitao izay novolavolain'izy ireo ny chips FinFET.
Ny teknolojia FinFET dia misy ny fanoloana ireo transistors planar an'ny hafa amin'ny karazana "fin" mamela izany mampihena ny haben'ny chips hatramin'ny 14nm ary avo roa heny ny zava-bitanao miaraka amin'ny ostensible fihenan'ny fandaniana angovo. Ireo mpikirakira sary vaovao ireo dia haparitaka amin'ny endrika roa: Polaris 10, izay hampiharina amin'ny iMac, ary Polaris 11 ampidirina ao amin'ny Macbook Pro.
Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny sary AMD Polaris ho an'ny Mac?
Ireto chips ireto dia antenaina hatolotra indroa ny hery miaraka amin'ny fahombiazan'ny angovo tena ambany. AMD Polaris sary dia handrefy hatramin'ny Mampiseho takiana sary i Retina Macbooks Pro sy iMac miaraka amin'ny fanohanan'izy ireo Vahaolana 4k. Vaovao tsara ho an'ireo mpankafy lalao video, izay miaraka amin'ireo sary ireo dia afaka nanatsara ny fahafahan'ny ampitao ny tontolon'ny gamer ny Macs.
La Fampihenana ny habeny Tombony kokoa noho izay azontsika eritreretina izany, mamela sisiny lehibe ho an'ireo injenieran'ny Apple fanavaozana ny Macbook. Ireo GPU ireo dia ahafahana mampihena ny haben'ny masinina, iray amin'ireo tanjona tsy tapaka. Hanana fanavaozana ihany ve isika amin'ny endriny ao amin'ny Macbook Pro?
Ny sary Polaris dia nambaran'ny orinasa Radeon ho an'ny tapaky ny taona 2016, Ka toa tsy dia azo antoka loatra izany fa, raha aseho ny modely Macbook Pro vaovao amin'ny WWDC manaraka, dia hampidirin'izy ireo ireo fanatsarana sary ireo. Ny azontsika hamafisina dia ny Apple mikasa ny hanao vaovao amin'ny vokatrao ho an'ny manaraka miverina amin'ny vanim-potoanan'ny sekoly izay, amin'ny daty, dia toa fotoana mety indrindra hahatongavana amin'ny FinFET amin'ny farany.
Rahoviana isika no afaka manamarina ny fahombiazan'ny tabilao Polaris? Tsy maintsy miandry hatramin'ny 13 Jona vao hahalala ny fikasan'i Apple ary, angamba, ireo daty namoahana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » AMD Polaris Graphics ho an'ny Mac 2016
Char dia hoy izy:
Polaris 10 dia ambony noho ny polaris 11 ary ny rehetra dia 14nm ny 16nm dia avy any NVIDIA
Mamaly an'i Char
Safari Technology Preview 4 Azo alaina ho an'ny OS X ankehitriny
Taylor Swift dia kintana amin'ny doka Apple Music iray hafa